Ukuveliswa kwebhokisi le-china ibhokisi kunye nefektri | JAHOO
Iphepha elilahlayo lithatha ibhokisi yencindi yesiphatho nemilinganiselo yemodeli (cm) Iphakheji ephezulu esezantsi yeePC / iibhegi zebhegi / i-ctn iiPC / i-ctn 16oz 8.1 × 7.3 7.7 9.8 50 10 500 26oz 9.8 × 8.5 9.5 9.3 50 10 500 32oz 10.2 × 8.9 9.5 11.5 50 10 500 Imilinganiselo yobungakanani (cm) Iphakheji ephezulu ephezulu ...
Iphepha elilahlwayo lisusa ibhokisi yosiwe ngesiphatho
Umzekelo Imilinganiselo (cm) Iphakheji
Ngaphezulu Ezantsi Phezulu IiPC / ingxowa Iingxowa / ctn Iifayile / ctn
26oz I-9.8 × 8.5 9.5 9.3 50 10 500
32oz I-10.2 × 8.9 9.5 11.5 50 10 500
26oz 10.5 × 9.3 I-8 × 6.9 10.4 50 10 500
Ukutya okuninzi okunamandla kufuna iphakheji eyomeleleyo, enganyangekiyo igrisi engavuziyo okanye ekrazulayo.
Iibhokisi zethu zokutya ziluphumelela uvavanyo njengoko abaqhubi bephakela izidlo ezikhulu ezinanditshwa kwiipikniki zosapho,amaqela eofisi okanye kwizidlo zasekhaya.
Ukubamba kunye nokutya kuvumela umboleki ukuba akhethe ukutya okuqhelekileyo ngaphandle kokulinda ukuba kulungiswe.
Ibhokisi yokutya okukhawulezayo sisiqulatho esincinci kunye nokuvulwa okubanzi okubonelela ngokubonakalayo okulula kwaye ngokukhawuleza uchonge ukutya okwahlukeneyo.
Umgca wemveliso sisisombululo esikhulu sokuthengisa kwiindawo ezibonelela abathengi ekuhambeni.
Siyazingca ngokubonisana nabathengi bethu ekuqwalaseleni iimfuno zabo zokupakisha kunye nokunikezela ngophuculo oluya kunciphisa iindleko zakho zokupakisha.
Sisoloko sijonga iikhonsepthi ezintsha kunye nezinto ezintsha zokupakisha kunye nabathengi bethu ukumisela yeyiphi eyona ndlela inexabiso eliphantsi kunye neyona isebenzayo yokupakisha iimveliso zabo.
Ukusuka kumaphepha okutya anganyangekiyo ukuya kwiibhegi ezinokuprintwa, Izisombululo zethu ezenziwe ngokwesiko ziyahlangabezana nezona mfuno zibalulekileyo zokupakisha ukutya.
Sinikezela ngeendlela ezahlukeneyo ezikhoyo, kubandakanya ukumelana namanzi, ukumelana negrisi, Iimpawu ezinokubakho, kunye neempawu ezintle zamandla.
Egqithileyo ibhokisi yesidlo sasemini
Okulandelayo: iphepha lephepha
Ezilahlwayo okwakhiwa Paper Chinese Noodle Box ukutya ...